प्रदेश २ मा फोरम नेपाललाई मुख्यमन्त्रीसहित गृह, सभामुखसहित राजपालाई तीन मन्त्रालय -
प्रदेश २ मा फोरम नेपाललाई मुख्यमन्त्रीसहित गृह, सभामुखसहित राजपालाई तीन मन्त्रालय
२७ माघ २०७४, शनिबार २१:३४ 1505 पटक हेरिएको
काठमाडौ २७, माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रदेश नं. २ मा मुख्यमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ । राजपासँग भएको ताजा सहमतिअनुसार फोरम नेपालको भागमा गृह मन्त्रालयसहित चार वटा मन्त्रालय परेको छ ।
शनिबार तीनकुनेमा फोरम नेपाल र राजपाको संयुक्त बैठकले प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रालयको भागबण्डा गरेको हो । फोरम नेपाल र र राजपाले प्रदेश २ को राजनीतिक भागबण्डा सहमतिका आधारमा टुंग्याएका छन् ।
यो सहमतिसँगै अब प्रदेश २ मा फोरम नेपाल र राजपाको दुई दलीय संयुक्त सरकार बन्नेछ । नयाँ सहमति अनुसार राजपाले पहिले भने जस्तो आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने छैन । फोरम नेपाल एक्लैले पाँच वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने छ ।
सहमतिअनुसार २९ सांसद रहेको फोरमले मुख्यमन्त्रीसहित उपसभामुख र तीन मन्त्रालय लिनेछ । मुख्यमन्त्रीसहित अब प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व फोरम नेपालले गर्नेछ ।
उसले आन्तरिक मामिला अर्थात् गृह मन्त्रालयत तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि लिने सहमति भएको छ ।
राजपाले सभामुखसँग भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने भएको छ । प्रदेशसभामा रापपाको २५ सांसद छ ।
फोरमले संसदीय दलको नेतामा लालबाबु राउत चयन गरिसकेको छ । उनी अब मुख्यमन्त्री हुनेछन् ।
हालै जनकपुरमा भएको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको वार्तामा मिलेर सरकार बनाउन सहमत भएपनि पद भागवण्डा मिलेको थिएन । राजपाले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्नु पर्ने, नभए सभामुखसहित प्रमुख मन्त्रालयहरु आफूले पाउनु पर्ने माग गरेको थियो ।
बैठकमा फोरम नेपालको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र महासचिव रामसहाय यादव सहभागी थिए । राजपाको तर्फबाट अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवको उपस्थिति थियो ।